Maxaa keenay in Gaalkacyo laga dhiso garoon cusub? W/Q Mahad Jama Koronto | RBC Radio
Maxaa keenay in Gaalkacyo laga dhiso garoon cusub? W/Q Mahad Jama Koronto
Posted on April 29, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Maxaa keenay in Gaalkacyo laga dhiso garoon cusub?
Qoraal aan galabta ku baahiyay darbiga qolkan aan ku leeyahay Facebook-ga ayaa la igasoo waydiiyay su’aal ahayd Maxaa looga guuray garoonkii hore ee Gaalkacyo? Dabadeed waxaan jeclaystay inaan uga jawaabo garashadayda wallow ay jiraan dad badan oo iigaga aqoon badan.
Garoonka Gaalkacyo ee hadda shaqeeya hadafkii loo dhisay wuxuu ahaa garoon ciidan waana sababta keentay in uusan u noqon karin garoon caalami ah.
Sida ay ii sheegeen khurabo aqoon u leh dhinaca duulimaadyada iyo garoomada haddii garoonku uu yahay garoon ciidan uuna sidaas ku diiwaan gashan yahay ma sahlana in loo badalo garoon rayid oo caalami ah oo ay ka dagi karaan diyaaraha waawayn ee rayidka qaada.
Dib u habaynta garoonkan waxay ka qiimo yartahay dhismaha garoon cusub taasina waxay ku tusaysaa in sababta looga doorbiday dhismihiisa aysan ahayn mid sahlan.
2007dii mar aan filim qaade u ahaa wafdi ka socda wadamada China iyo Sucuudiga oo waday qorshe dhisme garoon Gaalkacyo ay yeelato iyo dekedda Garacad waxaa meelihii garoonka loo sahmiyay ka mid ahaa deegaanka Heemo oo dhanka wuqooyi ka xiga Gaalkacyo (Mashruucaasi ma guulaysan) waana markii iigu horraysay ee aan wax ka ogaado kala duwanaanshaha garoon ciidan iyo mid rayid.
Is-qabqabsiga iyo dagaallada dhowr jeer ka dhacay garoonka iyo agagaarkiisa ilama aha sababta keentay dhismaha garoonka cusub maxaa yeelay arrinta ammaanka iyo isfahan waagu maaha arrin daba dheer waa howlo xal laga gaari karo sidoo kale ma filayo in Garoonka hadda shaqeeya laga guurayo balse waxaa isticmaali doona duullimaadyada qaar.
Maahi khabiir dhanka duulimaadk iyo garoomada ah laakiin qoraalkaan waxuu ku salaysan yahay dad aqoon u leh oo aan la sheekaystay, qoraallo aan akhriyay iyo fahankayga.